tGefvdkif;ay:rS owif;r[kwfaom tifwmAsL;rsm;? aqmif;yg;rsm;ESifh zwfp&m
Results 511 to 520 of 757
Thread: [mm]tGefvdkif;ay:rS owif;r[kwfaom tifwmAsL;rsm;? aqmif;yg;rsm;ESifh zwfp&m[/mm]
07-01-2012 04:06 PM #511
Yangon Chronicle မှကူးယူဖေါ်ပြသည်
မြန်မာသည်ကမ္ဘာကိုတံခါးဖွင့်ပြီးနောက် ချိနဲ့သောပညာရေးစနစ်နှင့် ကျောင်းမတက်နိုင်သော ပြည်သူများ များပြားနေခြင်းအတွက် တန်ဖိုးကြီးပေးဆပ်ရတော့မည်
(28 June 2012 ရက်စွဲပါ Washington Post မှ Denis d.Gray ရေးသားသော Now opening to world, Myanmar pays price for crippled education system and unschooled citizens ကိုဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
အဆောင်များသည် လူသူကင်းမဲ့နေသည်။ တချိန်က ဝင့်ကြွားခဲ့သော ပါမောက္ခနေအိမ်များသည် ပေါင်းမြက်များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ စစ်တပ်က ဗုံးဖြင့်ခွဲခဲ့သော ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးနေရာတွင် မြက်များသာ ပေါက်နေသည်။
ဤသည်ကား တစ်ချိန်က အာရှ၏အကောင်းဆုံး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ခန့် စစ်တပ်မှအုပ်စိုးခဲ့ပြီး ပညာရေးစနစ်ကို ချိနဲ့စေခဲ့ခြင်း၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဘွဲ့ရပြီးသော ကျောင်းသားများသာ ထိုနေရာတွင် စာသင်နိုင်သည်။ စစ်အစိုးရသည် ကျောင်းသားများဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြမှုများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်၊ မကြာခဏကျောင်းပိတ်ခဲ့ပြီး၊ ကျောင်းသားများကို ဝေးလံသော နေရာများတွင် အဆောက်အဦးနည်းပါးစွာဖြင့် ဖြန့်ကျက်ပစ်ခဲ့သည်။
ယခုမြန်မာနိုင်ငံသည် ပြင်ပကမ္ဘာသို့ တံခါးဖွင့်ခဲ့ချိန်တွင် ထို့အတွက်ကြီးမားစွာ ပေးဆပ်နေရပြီ ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်များကို ဖြိုခွဲပစ်ခဲ့ခြင်းသည် မျိုးဆက်နှင့်ချီသော ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် နှေးကွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ၊ အလှူရှင် များနှင့် အမြတ်အစွန်းကိုသာကြည့်မည့်သူများ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ဝင်ရောက်လာပါက ပညာရေးချို့တဲ့သော မြန်မာပြည်သူများသည် ခေါင်းပုံဖြတ် ခံရတော့မည်ဟု ပညာရှင်များက ပြောသည်။
“ကမ္ဘာကြီးကို အမှီလိုက်ဖို့ဆိုရင် အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်လောက်လိုပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးယဉ်ကျေးမှုကြီးကို ပြောင်းပစ်ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါလုပ်ဖို့သိပ်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်”ဟု ပညာရေးမြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နေသော မင်္ဂလာမြန်မာမှအကြီးအကဲ ဒေါက်တာဘုန်းဝင်းက ပြောသည်။
ကနဦးခြေလှမ်းများ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခင်ကလုပ်ဆောင်ဖူးခြင်းမရှိသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီး စစ်တပ်က အာဏာ ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို လျှော့ချနေသော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၎င်းတက်ရောက်လာစဉ်က မိန့်ကြားခဲ့သောမိန့်ခွန်းတွင် ပညာရေး တိုးတက်ရန် နှင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ ရှာဖွေရန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပညာရေးဘက်ဂျက်သည် စစ်တပ်သုံးစွဲမှုထက်စာလျှင် နည်းပါးလွန်းလှပြီး၊ လုံလောက်မှုမရှိဟု ကျယ်ပြန့်စွာ ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ဧပြီလက ပညာရေးဘတ်ဂျက်ကို ဒေါ်လာသန်း(၃၄၀)မှ သန်း(၇၄၀)သို့ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ဘတ်ဂျက်၏ ၂၅% ကိုစစ်တပ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ပညာရေးအတွက် ၁.၃% သာအသုံးပြုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓါတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများကိုင်တွယ်နိုင်မည့် အင်ဂျင်နီယာများ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်မှာ ဓါတုဗေဒပါမောက္ခ မျိုးဆက်နှစ်ဆက်နှစ်ခုရှိပြီဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးမိုးကျော်က ပြောသည်။
MBA ဘွဲ့ရများမှအစပြု၍ ရှေ့နေများနှင့် စာရင်းကိုင်များအဆုံးများစွာ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ဦးမိုးကျော်က တိတိပပ စိုးရိမ်ရသောအချက်မှာ အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပုံအောဝင်လာပါက ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များနှင့်လုပ်သားများ မရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ရန်ကုန်၏ အနာဂါတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက တိုင်းပြည်တွင်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ေ သာ ပညာရှင်(၅၀)ဦး ခန့်သာ ရှိပြီး (၅၀၀)ခန့် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံဟာ အမြတ်ထုတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အဆင့်အတန်းမှီတဲ့ လူတွေမရှိတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေက သူ့ဘာသာခေါ်လာကြတဲ့အခါ မြန်မာတွေအဖို့ လခကောင်းတဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဆုံးရှုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု UNESCO မှ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော Sardar Umar Alam ကပြောသည်။
“အစိုးရသည် အဆင့်မြင့်ပညာအတွက် ကျောင်းပေါင်း(၁၆၀)ခန့် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သော်လည်း၊ ဘွဲ့ရသူအများစုက ၎င်းတို့၏ဘွဲ့နှင့် မထိုက်တန်ကြောင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြက်ရယ်ပြုကြသည်။
ယခင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီဟောင်းဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးများ ပျောက်ဆုံးသွားရခြင်းအတွက် အများက စိတ်ပျက် နေကြသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်နှစ်လယ်များက နိုင်ငံခြားသားကြောက်သော ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက ကျောင်းများတွင် အတန်းငယ်များ၌ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားမှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တောတို့ မန္တလေးရုံးမှာ အလုပ်တော်တဲ့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတစ်ဦးရှိပါတယ်။ သူကစိတ်ပညာနဲ့ဘွဲ့ရပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးတောင် မပေါင်းတက်ပါဘူး”ဟု ဦးမိုးကျော်က ပြောသည်။
ပညာရေးအပေါ်ဆင်နွှဲသောတိုက်ပွဲမှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို အစိုးရဆန့်ကျင်သူများ၏ လှုပ်ရှားမှုများစတင်ရာနေရာ အဖြစ်မှတ်ယူ၍ ဗုံးခွဲခဲ့ရာမှ စတင်ခဲ့သည်။
သို့သော် အမှောင်ဆုံးနေ့ရက်များမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ကျောင်းသားများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲများ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရမှုများအပြီးတွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရသည် တက္ကသိုလ်များကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီး အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုများကို ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ကျောင်းသားများကို မြို့နှင့် ဝေးရာသို့ ပို့ပစ်ခဲ့သည်။
“တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွေဟာ တစ်စစီပြိုကွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစိုးရက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေရ မယ်လို့ ခံယူထားလို့ပါပဲ”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကြာသေးမီက ဗြိတိသျှပါလီမန်တွင် ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ပညာရေးစနစ်က လွန်စွာအားနည်းနေပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျောင်းတွေ၊ သင်ရိုးတွေနဲ့ ဆရာတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးတွေသာမကပဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပညာရေးအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားကိုလည်း ပြုပြင်ယူရပါမယ်။ လက်ရှိအားဖြင့် ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သဘောထားက အမြင်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းပြီး၊ ပြောင်းလဲလိုစိတ်မရှိပါဘူး”ဟု သူက Oxford တက္ကသိုလ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများမှာ ကျေးလက်တွင်ရှိသော ကျောင်းများသို့တက်ရောက်ရန် အားမရှိကြဘဲ အဝေးသင်ပညာရေးကိုသာ ပို၍စိတ်အားထက်သန် ကြသည်။ ကျောင်းသားများ၏ ၇၀% မှာ အဝေးသင်ဖြင့်သာ ဘွဲ့ယူကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဝေးသင်ကျောင်းသားများမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၁၀ ရက်ခန့်သာ ကျောင်းတက်ရပြီး၊ အိမ်တွင်လုပ်ရန် အဆိုင်းမင့်များပေးခြင်းသာ ရှိသည်။
အသက်လေးဆယ်ကျော်ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေသူများသည် အစိုးရထံတွင်သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလောကတွင်လည်းကောင်း အကြီးတန်း နေရာများတွင် ရောက်နေသင့်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခု ဤအရွယ်သို့ ရောက်နေသူများမှ ကျောင်းတွင်ပညာပြည့်ဝစွာမရခဲ့၊ အချို့ကလည်း ရည်မှန်းချက် ပျက်၍ အရည်အချင်းမပြည့်ဝဘဲ အလုပ်အကိုင်ဘဝထဲသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရပြီး၊ အချို့ကလည်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ ထွက်သွားရခဲ့သည်။
အာဏာရှင်စနစ်၏ လက်အောက်တွင်ရှိသော နှစ်များအတွင်း ပညာရေးစနစ်သည် အောက်သို့စိုက်၍ ထိုးဆင်းသွားခဲ့သည်။ စာမေးပွဲတွင် ခိုးချ ခြင်းများကလည်း ကျယ်ပြန့်လာသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် ကိန်းဂဏန်းမှာ မယုံနိုင်ဖွယ်ကျဆင်းခဲ့ရာ လူဦးရေ၏ ၇၀% သည် မူလတန်းပညာရေးကိုပင် ပြီးဆုံးအောင် မသင်နိုင်ဖြစ်ရသည်ကို တွေ့ရသည်။ တက္ကသိုလ်များ၏ အဆင့်အတန်းမှာလည်း လျင်မြန်စွာကျဆင်းခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါမောက္ခတွေဟာ သုတေသနလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး၊ စာတမ်းလေးရေး၊ ကွန်ဖရင့်လေးတက်ရုံပါပဲ။ သောကြာနေ့မှာ လျှောက်လွှာတင်၊ တနင်္လာနေ့မှာ ပါမောက္ခဖြစ်ပြီ”ဟု ဒေါက်တာဘုန်းဝင်းက ပြောသည်။
မကြာမီက စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးသို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရာ၊ ပြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ဒေါသများကို ဖော်ထုတ် လာကြသည်။ နာမည်ကြီးသော ဘလောဂ့်တစ်ခုတွင် ဘာမျှမတက်သော စစ်အရာရှိများသည် ၎င်းတို့၏ အာဏာကို အလွဲသုံးစား၍ ချမ်းသာအောင် လုပ်နေ သည်ဟု ပညာရေးတာဝန်ရှိသူများကို စွပ်စွဲပြောဆိုထားသည်။
သို့သော်အစိုးရသည် ၉ သန်းမျှရှိသော ကျောင်းသားများတိုးတက်မှုရှိရေးအတွက် ကြိုးစားနေပုံတော့ရသည်။
ကျောင်းဆရာများမှာ ဆင်းရဲသည့်အဆင့်တွင်ပင် ရှိနေသေးပြီး လစာတိုးမြှင့်ပေးထားပြီး တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ (၃၀) တိုးပေးထားသည်။ ကျေးလက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ နှစ်ဆတိုးသည်။
ယခင်ကတည်းက အဆက်အသွယ်ရှိ်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များ ပြန်လည်တည်ထောင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ အမေရိကန်၏ John Hopkins တက္ကသိုလ်သည် ဘွဲ့ရကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများလေ့ကျင့်ပေးရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် Center of Excellence ထူထောင်ရန် စီစဉ်နေသည်။
“သမ္မတကြီးကတော့ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့ တကယ်ကိုတွန်းအားပေးနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါက အထက်က အောက်သွားတဲ့ပုံစံ(top-down)ဖြစ်နေတော့၊ ညွှ့န်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်လောက်မှာတင် ရပ်နေတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ လေးစားရသော ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်မှူးဟောင်း ဦးသော်ကောင်းက ပြောသည်။ “အစိုးရက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ စကားကို နားထောင်နေတာပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ ဝန်ကြီးအဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတွေတောင် မေးနေကြတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာပညာတက်အများစုက သမ္မတအကြံပေးဦးမြင့်၏ ယခုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် ဖော်ပြထားသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်ရန်နှင့် ပြည်သူလူထုအလှူငွေဖြင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦး ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရန် တိုက်တွန်းထားမှုအား ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ တုန့်ပြန်မှုကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အား အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော မှတ်တိုင်ဟုလည်းကောင်း၊ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် အသစ်စတင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထွက်ပေါ်လာမည့် ရလဒ်သည် အစိုးရက ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် အလေးအနက်ထားခြင်း ရှိမရှိ အဓိကစမ်းသပ်မှုအတွက် သက်သေဖြစ်မည် ဖြစ်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းအားကိုကြောက်ရွံ့သော စိတ်၏ အရိပ်ထိုးမှုခံရဆဲလားဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်ရပေတော့မည်။
honelay86, Jim, jim beam, ko too, koluchaw, lovecupid, MNO.BN, Nsaboy, Ravan, tiptop
07-03-2012 10:05 AM #512
အဆောင်များသည် လူသူကင်းမဲ့နေသည်။ တချိန်က ဝင့်ကြွားခဲ့သော ပါမောက္ခနေအိမ်များသည် ပေါင်းမြက်များဖုံးလွှမ်း လျက် ရှိသည်။ စစ်တပ်က ဗုံးဖြင့်ခွဲခဲ့သော ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးနေရာတွင် မြက်များသာ ပေါက်နေသည်။
ဤသည်ကား တစ်ချိန်က အာရှ၏အကောင်းဆုံး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ခန့် စစ်တပ်မှ အုပ်စိုးခဲ့ပြီး ပညာရေးစနစ်ကို ချိနဲ့စေခဲ့ခြင်း၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဘွဲ့ရပြီးသော ကျောင်းသားများသာ ထိုနေရာတွင် စာသင်နိုင်သည်။ စစ်အစိုးရသည် ကျောင်းသားများဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြမှုများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်၊ မကြာခဏကျောင်းပိတ်ခဲ့ပြီး၊ ကျောင်းသားများကို ဝေးလံသော နေရာများတွင် အဆောက်အဦးနည်းပါးစွာဖြင့် ဖြန့်ကျက်ပစ်ခဲ့သည်။
honelay86, ko too, MNO.BN, zani
07-03-2012 10:49 AM #513
သမဂ္ဂအဆောက်အအုံ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှု တရားခံများ
ဧရာဝတီဘလော့ . ၁ရက်နေ့ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ —-
ဦးနေ၀င်း၊ ဦးအောင်ကြီး၊ ဦးစိန်လွင်
ဒီနှစ်ရဲ့7July နှစ်ပတ်လည်နေ့ နီးလာချိန်မှာ ဘိုးသိမ်းရဲ့ ”ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံ ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးမှု တရားခံ ဘယ်သူလဲ” ဆိုတဲ့ စာတမ်း အင်တာနက်မှာ စတင် ဖြန့်ဝေနေကြပါပြီ။
“ကျွန်တော်ဟာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကြီးကိုဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးဖြိုချခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာ အသက် (၂၅) နှစ်အရွယ် ဆေးသိပ္ပံနောက်ဆုံးနှစ်အတန်းမှာ စာသင်နေတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ဟာ အသက် (၇၅) နှစ်အရွယ် ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ”
လို့ သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
“အဲဒီမှာ ဖောင်တိန်ပင် (Fountain Pen) ကိုသာ ကိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ဦးနေဝင်းဟာ ရန်သူစခန်းကြီးတစ်ခုကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်သလို ဘာကြောင့် တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အချက် (၂) ချက်ကို တွေ့ရပါတယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ရေးထားတာ ဖတ်ရမှာပါ။
ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်က သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံဓာတ်ပုံ ကိုင်ဆောင်ထားသူတဦး
“အေးချမ်းသာယာနေတဲ့ တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲကို ရန်သူစစ်စခန်းကြီးလို ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအများအပြားကို ရက်ရက်စက်စက်သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်မှု၊ တကသအဆောက်အဦးကို မိုင်းခွဲဖြိုချ ဖျက်ဆီးမှု၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်(Social environment) ကြီးတခုလုံးကို အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကြေမွပျက်စီးသွားအောင် ဖျက်ဆီး မှု၊ အဲဒီပြစ်မှုတွေအားလုံး ရဲ့ တရားခံဟာ တကသစစ်ဆင်ရေးကြီးကို စီမံကိန်းချပြီး ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီတခုလုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဦးနေဝင်းကတော့ တော်လှန်ရေးကောင်စီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်တဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးကောင်စီ လုပ်သမျှကို တာဝန်ယူရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နံပါတ်(၁) တရားခံဟာ ဦးနေဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီမှာ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဆိုတဲ့ ရာထူး မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးဟာ တပ်မတော်ရဲ့ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်မှာ ဦးနေ၀င်းပြီးရင် ဒုတိယ တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဦးအောင်ကြီးဟာလည်း တကသ အဆောက်အဦး မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးမှု အပါအဝင် တကသ ထိုးစစ်ကြီးမှာ ဒုတိယ တရားခံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာ့အသံမှာ ရုံးခန်းဖွင့်ပြီး နောက်တန်းစစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး လှဟန်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းစိန် (ပခုက္ကူ)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတန်ယုဆိုင် အပါအဝင် တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် အားလုံးဟာ တကသစစ်ဆင်ရေးကြီးရဲ့ စစ်ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာမှာ အတူပါဝင် သဘောတူခဲ့ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးဟာ တတိယတရားခံတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကမာရွတ်ရဲစခန်းမှာ ရှေ့တန်း စစ်ဆင်ရေး ဌာနချုပ် ဖွင့်လှစ်ပြီး တက္ကသိုလ်နယ်မြေ ထိုးစစ်ကြီးကို အနီးကပ် လမ်းညွှန်နေတဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိန်လွင် (၈.၈.၈၈ နေ့က သမ္မတအဖြစ်နဲ့ ပြည်သူတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်မိန့် ပေးသူ) ဟာလည်း တရားခံစာရင်းမှာ မထည့်ဘဲချန်ထားလို့မရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနေဝင်းနဲ့ ဦးအောင်ကြီးတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် လက်ညှိုးထိုးပြီး စွပ်စွဲနေကြတာဟာ ပြန် စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ အလွန်ရယ်စရာကောင်းနေပါတယ်။
ကလေးတွေ ကစားကြရင်း အရုပ်ကလေးတစ်ခု ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာ ”တားတားလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ တူလုပ်တာ၊ တူလုပ်တာ” ဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုးတရားခံ လွဲချတာမျိုးနဲ့ တူပါတယ်။ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ”သမိုင်း အမဲကွက်ကြီး” တခကို ဖန်တီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြသူတွေ အနေနဲ့ အဲဒီလို လွယ်လွယ် ကူကူ လက်ညှိုးလေးထိုးပြီး ”ငါမပါဘူး သူလုပ်တာ” ဆိုရုံနဲ့ သမိုင်းတရားခံတွေ စာရင်းထဲက လွယ်လွယ်ကူကူ ပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်ပါဘူး” တဲ့။
သူနဲ့ တခြားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အဖမ်းခံရပုံ၊ သမဂ္ဂအဆောက်အအုံ ၂ ကြိမ် အဖျက်ခံရပုံတွေနဲ့ အဲဒီခေတ် နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုလည်း သမဂ္ဂအဆောက်အအုံ ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးမှု တရားခံ ဘယ်သူလဲ စာတမ်းမှာ ဖတ်ရှုရမှာပါ။
abya, AUNGTHUYA, Bae Lu Wa, galladino, honelay86, Jim, jim beam, k-pooh, Ko Khant, ko too, Mahuya, thuthuaung, zani
07-03-2012 02:58 PM #514
AUNGTHUYA, Hollinaz, honelay86, Jim, jim beam, ko too, ktg, MNO.BN
07-04-2012 12:53 AM #515
ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ် ယခင်အပတ်ထုတ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။
bluekite, honelay86, Incubuz, Ko Khant, ko too, ktg, zani
07-04-2012 04:02 PM #516
Credit to7days Journal ‘s note:
(ဘေးမှ ရပ်ကြည့်သူတစ်ဦး၏ နိုင်ငံရေးဒိုင်ယာရီ ၂၀၁၂)
- မိုးမရွာ၊ ပိတောက်မပွင့်သည့်သင်္ကြန် (ဧပြီ ၂ ရက်မှ မေ ၂ ရက်သို့)
ဧပြီ ၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အမတ်နေရာ ၄၄ နေရာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ နောက်တစ်နေ့ ဧပြီ ၂ ရက်တွင် အဖြေထွက်လာသည်။ အင်န်အယ်လ်ဒီ ၄၃ နေရာနိုင်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အင်န်အယ်လ်ဒီအမတ်များ လာမည့်နှစ်ဦးတွင် လွှတ်တော်တက်ကြပေတော့မည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအင်အားစု အားလုံးနီးပါး လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးတွင် စုစည်းမိကြချေပြီ။
အားတက်ရွှင်လန်းစိတ်ဖြင့် The Waves ခေါင်းကြီးကို စာရေးသူ ယခုလိုဖွင့်လိုက်သည်။ “နှစ်ကူးတော့မည်။ သင်္ကြန်လက်ဆေးမိုးလေး တစ်ပြိုက်နှစ်ပြိုက် ရွာသည်နှင့် ပိတောက်တွေ ထိန်ထိန်ဝေတော့မည်။ နောက်သင်္ကြန်ရေအေးဖြင့် နှစ်သစ်ကိုကြို” သို့နှင့်တိုင် သင်္ကြန်ရက်တွေသာ ကုန်သွားသည်။ သင်္ကြန်မိုးက မလာ၊ ပိတောက်က မပွင့်။ နှစ်ဦးနေကား အငြိုးတကြီးပူဆဲ။
အင်န်အယ်လ်ဒီအမတ်များ၊ လွှတ်တော်တက်သင့်၊ မတက်သင့်။ မတက်သင့် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟု ကြားရသည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလက စိုးရိမ်မှုတွေ၊ တစ်ကျော့လည်လာရသည်။ တစ်ဖက်ပိတ်လမ်း အန္တရာယ်။ မေ ၂ ရက် ရောက်တော့မှ ဟင်းချနိုင်တော့သည်။ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် မဲဆန္ဒရှင်လူထု၏ ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်တက်တော့မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြေညာသည်။ အင်န်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်တက်ပြီ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထိုနေ့မှ မိုးစရွာသည်။ ပိတောက်ဦးကို မြင်ရသည်။
- ရင်တမမ မေလ (မေမှသည် ဇွန်လဆန်း)
နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်၊ ဆယ်စု ငါးစု ရာစုတစ်ဝက်။ နည်းတဲ့နှစ်တွေမှ မဟုတ်လေဘဲ။ ဤမျှရှည်လျားသော နွေကန္တာခရီးကို တေမိထုံးနှလုံးမူကာ လျှောက်ခဲ့ရသူများအတွက် လွတ်လပ်မှု လေပြည်လေညင်းလေး ထိတွေ့ခွင့်ရသည်နှင့် ပြောချင်၊ ဆိုချင်၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ချင်ကြမည်မှာ လွန်စွာမှပင် သဘာဝကျပါသည်။ ပြောစရာ၊ ဆိုစရာ၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်စရာတွေကလည်း လူတိုင်းကိုယ်စီ ရင်နှင့်အပြည့်။ အားလုံးမှာက “သုမနကျောမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့” ဆိုသလို။
ပထမဆုံး အပြောင်းအလဲကာလ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဒဏ် အခံရဆုံး အလုပ်သမားတွေကစသည်။ လုပ်ခလစာ တိုးပေးဖို့။ နောက်မြို့ပြဒေသ၏ နိစ္စဓူဝဒုက္ခဟု ဆိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီးပြဿနာ၊ ၂၁ ရာစု၏ မြို့ပြညကို ဖယောင်းတိုင်မီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြင့် အန်တုရင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်လာကြသည်။ ထိုသည်၏နောက် ကျောင်းသားလူငယ်များ။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်က ဖြိုချခံခဲ့ရသော ဆယ်စုများစွာ၊ မျိုးဆက်များစွာ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် မက်ခဲ့ရသော အိပ်မက်။ အားလုံးမှာ အလွန်သဘာဝကျသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။ မိမိတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ဘ၀တွေနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်မို့ ပို၍ပင် စာနာမိသည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ဝန်းကျင်က အကျည်းတန်အဖြစ် သနစ်များကလည်း သွေးစိမ်းရှင်ရှင် ခြောက်လှန့်ဆဲ။ သည်လိုပဲ လမ်းပေါ်က စသည်။ နောက်လမ်းပေါ်မှာပဲရှင်း။ အချို့တောနှင့်တောင်၊ အချို့နံရံတံတိုင်း။ စာရေးသူက လူငယ်တွေကို ကိုယ်လိုအမြီးပြတ်ဖို့ သေဖော်မညှိချင်။ ထို့ထက် ဖြစ်တည်ခါစ ဒီမိုကရေစီသန္ဓေသား ကတိမ်းကပါးဖြစ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်သည်။ တော်ပါသေးသည်။ စာရေးသူ စိုးရိမ်သလိုကား မဖြစ်။ အစိုးရသစ်၏ ကိုင်တွယ်ပုံနှင့် လူထု၏ နိုင်ငံရေး ရင့်ကျက်မှုကို အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ရပေလိမ့်မည်။ မိုးနတ်မင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါလိမ့်မည်။ (ကျွန်တော်တို့အခြေအနေက မိုးရွာမှ မီးလာမဟုတ်ပါလား)
-အနောက်မှလာသော တန်ပြန်လှိုင်း (ဇွန်လ၏ မိုးရေစက်များ)
ဇွန်လ၏ မိုးရေစက်များတွင် ပြန်လည်လန်းဆန်းလို့မှ မ၀တတ်သေးခင် နောက်ထပ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်ရပြန်သည်။ ပြောရလျှင် စိန်ခေါ်ချက်သက်သက်မက ရိုက်ချက်ဟူ၍ပင် ဆိုနိုင်လောက်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် မောင်းတောဒေသမှ စလိုက်သော ပြဿနာ။ ပြဿနာ၏အစမှာ ရှောင်တခင်မတော်တဆဟု ဆိုနိုင်စရာရှိပါသည်။ အမှန်စင်စစ် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးသာမက သစ္စာခံမှုပါ ထွေပြားသော ဘူးသီးတောင် မောင်းတောလို “ထိစပ်နယ်မြေ” (borderland) များတွင် ယခုလို တိုးမိတိုက်မိ ဖြစ်တတ်သည်မှာ ဘာမှမဆန်း။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်သာ ဖြစ်သည်။
သို့တိုင်အောင် မူလအစက ရေပွက်ငယ်မျှကို ၀ဲဂယက်ကြီးဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မောင်းတင်လာသော တန်ပြန်လှိုင်းတွေကို တွေ့လာရသည်။ အနောက်မှ လာသောလှိုင်း။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရေစီးကို အရှိန်မရမီမှာပင် အမှိုက်သရိုက် ဒိုက်သရောများဖြင့် ရေသေဖြစ်စေရန် ချိန်ခါသင့် ကြိုးပမ်းမှုမျိုးပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင် ပြဿနာမှာ ရိုးရိုးလေးမဟုတ်တော့။ ထွေပြားလာရတော့သည်။ ကိုလိုနီစနစ်မှ စတင်သော သမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်လာသလို စစ်အေးလွန်ခေတ် ရှုပ်ထွေးပွေလီ ဆန်းပြားသော နိုင်ငံတကာ အခင်းအကျင်းနှင့်လည်း ပတ်သက်လာသည်။ ထို့ထက်ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး၏ အနာဂတ်။
ဤသို့ ရင်လေးစရာ သတင်းများနှင့် နပန်းလုံးနေရစဉ်မှာပင် ရင်အေးစရာ သတင်းအချို့ကိုလည်း ကြားဖြတ်ကြားရသည်များ ရှိပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြည်ပခရီးစဉ်နှစ်ခု။ ပထမခရီးစဉ်(ထိုင်းခရီးစဉ်)တွင် ဘ၀င်မကျသံအချို့ ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားရသော်လည်း ဒုတိယခရီး(ဥရောပခရီးစဉ်)မှာမူ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အနာဂတ်အတွက် အတိတ်ကောင်း နိမိတ်ကောင်းဟု ဆိုချင်သည်။ ဤခရီးစဉ်တွင် သူမက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ထုတ်ဖော်ချီးကျူးသည်။ သမ္မတဦးဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို ကြိုဆိုအားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းသည်။ နိုင်ငံရေးကွဲပြားခြားနားမှုများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု ကတိပြုသည်။ အဆိုပါ စိတ်ဓာတ် အဆိုပါ သဘောထားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အင်န်အယ်လ်ဒီအမတ်များ လွှတ်တော်တက်ကြပေတော့မည်။ ဇူလိုင် ၄ ရက်။
- ဒီမိုကရေစီပင်မရေစီး (ဇူလိုင်မိုးကိုကြို)
စာရေးသူတို့ လူငယ်ဘ၀ ဖြတ်ခဲ့ရသောခေတ်တွင် မည်သည့် ပါတီအဖွဲ့အစည်းမှ မရှိပါ။ (အာဏာရပါတီမှလွဲ၍) မည်သည့်လွှတ်တော်မှ မရှိပါ။ (ရာဘာတံဆိပ်တုံး လွှတ်တော်မှလွဲ၍) သို့နှင့်အမျှ ထွက်ပေါက်ပိတ်နေသော ဆန္ဒအထွေထွေမှာ အခါအားလျော်စွာ လမ်းမများပေါ်သို့သာ လျှံကျကုန်ရပါသည်။ သည်တော့လည်း လမ်းပေါ်တွင်သာ ဖြေရှင်းခဲ့ကြရာမှ ဆန္ဒတွေမှာ အာဃာတတွေ ဖြစ်ကုန်ရတော့သည်။ အကျိုးဆက်ကား လူထုနှင့် အစိုးရကြား ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ ပေးဆပ်လိုက်ရသည်ကား တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ။
ဒီမိုကရက်တစ် လွှတ်တော်မှာ လူထု၏ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရာ ဆုံးဖြတ်အဖြေရှာရာ ဖိုရမ်ကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။ ယခုထက်တိုင် အပြီးအပြတ် အဖြေမရသေးသော အလုပ်သမားထု လိုလားချက်။ ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ ဆန္ဒနှင့် လျှပ်စစ်မီးကိစ္စများကို လာတော့မည် လွှတ်တော်တွင် ဦးနှောက်မုန်တိုင်း ဆင်ကြရပါလိမ့်မည်။ မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာ အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ပေါ်လစီခင်းနိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောအရေးကိုလည်း ပို၍ကြီးမားသော အမြော်အမြင်၊ ပို၍အားကောင်းသော ၀ါယမဖြင့် ပီပီပြင်ပြင် ကိုင်တွယ်ရပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်လျှင် နှစ်နိုင်ငံ စားပွဲဝိုင်းသာမက နိုင်ငံတကာအဆင့် ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသည်အထိ ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ကြရပါလိမ့်မည်။
ဆိုခဲ့ပါ ပြဿနာများမှာ အဓိကအားဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဖြစ်ရာ အင်န်အယ်လ်ဒီ၏ ရွေးကောက်ပွဲအကြို မဲဆွယ်ကာလ၊ ကြွေးကြော်သံနှင့် သဘောညီပါသည်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ၏ နောက်ထပ်အရေးကြီးသော ပြဿနာတစ်ရပ်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအရေး ဖြစ်ပါသည်။ ကေအိုင်အေအဖွဲ့နှင့် အမြန်ဆုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ဖို့ လိုသလို အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးရပြီး အဖွဲ့အားလုံးနှင့်လည်း နိုင်ငံရေးအရ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြဖို့ လိုပါသည်။ ဤကိစ္စမှာလည်း အင်န်အယ်လ်ဒီ၏ ဒုတိယကြွေးကြော်သံ (ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး)နှင့် ထပ်တူပင်ဖြစ်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမည့် “ဘုံတူညီချက်” Common Ground ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရက်တစ် ဖိုရမ်ကြီးဖြစ်သော လွှတ်တော်တွင် အဆိုပါ ဘုံတူညီချက်ကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှုမဏ္ဍိုင် ပို၍ပင် ခိုင်လာနိုင်စရာရှိပါသည်။ သို့သော် ...။ ဤသို့သော်ကား အရေးကြီးလိမ့်မည် ထင်သည်။
- သုံးပွင့်ဆိုင် ညီညွတ်ရေးမှသည် ဒီမိုကရေစီ အနာဂတ်ခရီး (ဇူလိုင်-အလွန်)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလ တတိယကြွေးကြော်သံမှာ၊ “အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး” ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရက်တစ်နှုန်းစံများနှင့် ချိန်ထိုးစဉ်းစားလိုက်လျှင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတွင် အားနည်းချက်အချို့အမှန်ပင် ရှိပါသည်။ (အလုပ်ထောင့်မှ ကြည့်လျှင်မူ လူးသာလွန့်သာသည့် လှုပ်ရှားခွင်များလည်း ရှိသလောက် ရှိသည်သာ ဖြစ်သည်) တစ်ချိန်ချိန်တွင် ပြင်သင့်ပြင်ထိုက်သည်များကို ပြင်ကြရမည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့တစေ ယခုလောလောဆယ်တွင်မူ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စမှာ ရှေ့ကဖော်ပြခဲ့သော ပြဿနာများ(တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး) မှာလို ဘုံတူညီချက်ရဖို့ မလွယ်လှသေးဟု သဘောရပါသည်။ ယုံကြည်မှုခိုင်ဖို့ထက် ယိုင်ဖို့က ပိုများနိုင်သည်။ အချင်းချင်းနီးဖို့ထက် ဝေးဖို့က ပိုများနိုင်စရာရှိသည်။ လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်း ဘုံတူညီချက်များကို လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရင်း ပိုခိုင်ပိုနီးလာမှ ဤကိစ္စကိုကိုင်လျှင် ပိုအဆင်ပြေလွယ်ကူလေမည်လား စဉ်းစားမိသည်။
အမှန်စင်စစ် လက်ရှိ အခင်းအကျင်း၏ မြစ်ဖျားခံရာမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဒီမိုကရက်တိုင်ဇေးရှင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် ဖိလစ်ပီရှမစ်ထာက မြန်မာ့ပုံစံအရွေ့ကို “သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီး အပြောင်းအလဲ” impored transition ဟု ဆိုပါသည်။ တည်ဆဲအီလစ်များ ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်သည်ဖြစ်၍ အထက်မှလာသော အပြောင်းအလဲ transformation from above နှင့် စတင်သည်။ ယခင် တပ်မတော်အစိုးရက ကြီးမှူးကျင်းပပေးခဲ့သော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့၍ (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အင်န်အယ်လ်ဒီပါ ပါဝင်လာ၍) elite led change သက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲ အထက်နှင့်အောက် ပူးတွဲလာသော အပြောင်းအလဲ transformation from above and below ဖြစ်လာသည်။ ဤတွင် ပြောလိုသည်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရက်တိုင်ဇေးရှင်းသည် သွေးတူမွေးတူ တစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီတည်း မောင်းနှင်သော အရွေ့မဟုတ်၊ ဖြတ်သန်းပုံရော၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံပါ ကွဲလွဲနိုင်သည့် အင်အားစုပေါင်းစုံ ၀ိုင်းတွန်းကြရသော အရေးတော်ကြီးဟု ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင်တူတွန်းမှ ရွေ့နိုင်မည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတွင် ပလေယာအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေးမှာ သော့ချက်အကျဆုံးဟု ဆိုချင်ပါသည်။ အစိုးရလွှတ်တော်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အရဆိုလျှင် ဦးသိန်းစိန်၊ သူရဦးရွှေမန်း (ဦးခင်အောင်မြင့်လည်း အပါအ၀င်)နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ သုံးပွင့်ဆိုင် ညီညွတ်ရေး။ ဤညီညွတ်ရေးဖြင့်သာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခရီးကို နောက်မပြန်တမ်း ရှေ့ဆက်ချီနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဆိုရလျှင် စာရေးသူတစ်သက် အိပ်မက်ပင် မမက်ဖူးသော လက်ရှိနိုင်ငံရေး ရာသီဥတုကို ဘယ်လိုနည်းနှင့် ပြန်မဆိုးစေချင်တော့ပါ။ ပို၍ပို၍ သာတောင့်သာယာ ဖြစ်သည်ကိုသာ မြင်လိုတွေ့လိုပါတော့သည်။ သို့နှင့်အမျှ ယခုလာတော့မည့် လွှတ်တော်တွင်ဆိုခဲ့ပါ သုံးပွင့်ဆိုင် ညီညွတ်မှုဖြင့် အနာဂတ်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ဗိမာန်တော်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် အုတ်မြစ်ချနိုင်ကြပါစေ ...ဟူ၍သာ။
bluekite, DrJones, honelay86, ko too, ktg, mgchaint, MNO.BN
07-06-2012 03:53 PM #517
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီထက် အသွင်းကူးပြောင်းမှု အရင်ဖြစ်သည်
(5 July 2012 ရက်စွဲပါ Global Times မှTransition comes before democrary in Myanmar ကိုဘာသာပြန်ဆိုသည်)
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏လျင်မြန်သော နိုင်ငံရေးအရပြောင်းလဲမှုများသည် ကမ္ဘာကြီးကို အံအားသင့်စေပြီး အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော မှတ်ချက်များကိုလည်း ကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည်လည်း ယာယီသဘောဆန်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်သူများ၏မျှော်လင့်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်လော။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့သော သဘောထားသစ်များ ရှိလာမည်နည်း။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ Global Times (GT) မှ သတင်းထောက် Yu Jinuri သည် အစိုးရ၏ ဥာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့(Think Tank)တစ်ခုဖြစ်သော Myanmar Egress မှဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်သန်းနှင့် စကားပြောခဲ့သည်။
GT။ ။ မြန်မာအများစုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုင်းပြည်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လို့ ထင်မြင်နေကြတယ်။ သူဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ့မလား။
သန်း။ ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေရာ(Role)ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့စံပြဇာတ်ကောင် (democratic icon) တစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ ပြောဆိုမှုများကို လိုက်ကြည့်ရင်၊ အကျင့်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မူပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ အလွန်မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုရင် အခုအခြေအနေမှာ သူ့အတွက် အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်မှာပါ။ သူဟာ အခုအသက်(၆၇)နှစ်ရှိပါပြီ။ ပြင်းထန်တဲ့ ဆန္ဒမရှိရင် အခုလိုရွှင်လန်းတက်ကြွမနေနိုင်ပါဘူး။ သူဟာ အလွန်အင်အားကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ NLD ပါတီဟာ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပါတီအဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့ အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး မြေအောက် အသွင်နဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အခြေခံခိုင်အောင်တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်မရခဲ့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုကတိပေးထားတာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုတယ် ဆိုရင်တော့ သူ့အတွက် အားကောင်းတဲ့ အခြေပြမှုတစ်ခု (Strong Base)လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် အဲဒီသဘော မတွေ့ရသေးပါဘူး။ သူ့ရဲ့ကတိအတိုင်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကတော့ သူဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပါမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလဲ တကယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ လူတွေလိုပါတယ်။ သူ့အတွက် ခက်ခဲတဲ့အချိန်များပါပဲ။
သန်း။ ။ ဒါကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းကြရတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒေါ်စုက သူ့ပါတီရဲ့ ရပ်တည်မယ့်နေရာကို ပြောင်းပေးခဲ့သလို၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့ သဘောတူညီချက်(Negotiated Agreement)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသော ကတိကတော့ ဒေါ်စုကသော်လည်းကောင်း အစိုးရကသော်လည်းကောင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နောက်ကျောဓါးနဲ့ မထိုးပါဘူးလို့ ဆိုတာပါပဲ။ နှစ်ဖက်စလုံး စနစ်တကျ ဆွေးနွေးပွဲမရှိဘဲနဲ့ စကားပြောရုံနဲ့ပဲ လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။
GT။ ။မကြာခင်က ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို အချို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာ နောက်ပြန်လှည့်မယ့် ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ မြင်နေကြတယ်။ ဒါကို ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
သန်း။ ။ဒီကိစ္စဟာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အာဆီယံလူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာ ဒါမျိုး လူမှုရေးပြဿနာတွေ မီးပွားလေး အသေးလေးနဲ့လဲ အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူထုဖိအားပေးမှုကြောင့် တင်းမာမှုတွေ ရှိလာတာပါ။ လူနည်းစုအုပ်စုတွေရဲ့ သဘာဝတွေ၊ ခံစားမှုတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုင်တွယ်ရပါတယ်။ သူတို့ဟာလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သူတို့ကို အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပေးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကတော့ မေးခွန်းကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကို နိုင်ငံရေးအရလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပဲ အေးအေးဆေးဆေး ပြေလည်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ အရင်အစိုးရလက်ထက်က ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။ အခုလုပ်ဖို့ ဖြစ်လာပါပြီ။ ခရီးရှည်ကြီး သွားရဦးမှာပါ။ စိတ်ကို အေးအေးဆေးဆေးထားပြီး၊ ဆွေးနွေးမှု စတင်ရပါမယ်။
GT။ ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဘယ်လိုဆက်လက်မြှင့်တင်သင့်ပါသလဲ။
သန်း။ ။ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်က ခံစားခဲ့ရတာတွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေပေါ့။ အာရပ်နွေဦးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာ လုံးဝခြားနားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က တွန်းအားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အခုငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ အနောက်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီပုံစံနဲ့တော့ ဒီမှာအံမဝင်ပါဘူး။ ကျွန်တော် မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်မှုများ(Democratization )ထက်စာရင် အသွင်ကူးပြောင်းရေး(Transition) က ပိုအရေးကြီးပါတယ်လို့။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုတာ အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ တပြိုင်နက်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးဟာ အရှည်ကြီးသွားရမယ့်စိန်ခေါ်မှု၊ ဒါပေမယ့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးက အရင်လာရပါမယ်။
GT။ ။မြန်မာနိုင်ငံဟာ မနှစ်က အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေက ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။
သန်း။ ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ဖို့အားပေးနေခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက် မအံ့သြခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုတော့ အံ့သြပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ ဒီပွဲကြီးမှာပါတဲ့ ပလေယာ(players) အားလုံးက ပြောင်းလဲမှုကို ကြိုက်နှစ်သက် ကြပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေ၊ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ NLD ရယ် အခြားပါတီတွေ ရယ်ကတော့ ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲမှုကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိ နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကပြောင်းလဲမှုကို နှစ်သက်ပါတယ်။ တံခါးဖွင့်ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်း ဝင်လာဖို့ ကြိုးစား နေပါပြီ။ လုပ်ရင်းနဲ့ ဘာတွေ့လာရလဲဆိုတော့ အရင်ကမသိတဲ့အရာတွေကို သိချင်လာတယ်ဆိုတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းပါတယ်။
GT။ ။ဒီပြောင်းလဲမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အခြားနိုင်ငံများဆက်ဆံရေး၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိစေမလဲ။
သန်း။ ။တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက အားကောင်းစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ မြန်မာအတွက် ဘယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှ တရုတ်လောက် အရေးကြီးတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ အခု မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာပေမယ့် အခြား နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းများနဲ့ ပိုမို ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိ လာမှာကို ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အရင်ကတော့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိမှာကို ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အပြောင်းအလဲကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်နိမ့်တဲ့(lower-grade)တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အရှုံးပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ နေရာသစ်တစ်ခု ပြောင်းဖို့ ရှာရပါလိမ့်မယ်။ အချို့ တရုတ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေ ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ် ရှိလာမယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လက်တွေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ အတူတကွနေထိုင်ပြီး ကြောင်းကျိုးညီညွတ်နေပါတယ်။
honelay86, htinlinn, Jim, ko too, MNO.BN
07-07-2012 01:53 AM #518
ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းကို မသိသေးသူများအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ် .....
honelay86, ko too, MNO.BN, Ravan, zani
07-07-2012 05:05 PM #519
(7 July 2012 ရက်စွဲပါ The Economist မှ The idea of Myanmar ( Aung San SuuKyi’s ethnic-minority problem) ကိုဘာသာပြန်ဆိုသည်)
ယခုရက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဝေဖန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သူ၏ တိုင်းပြည်ပြင်ပမှ လူများအနေဖြင့် အနည်းငယ်ကသာ အိပ်မက်မက်ဖူးကြလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက သူ၏ ဥရောပခရီးစဉ်တွင် အားလုံးက လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ နွေးထွေးစွာ လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ သူ၏သိက္ခာ၊ ရဲရင့်မှု၊ ဥာဏ်ရည်မြင့်မှုနှင့် ဟာသဥာဏ်ရှိမှုတို့သည် သူ့အပေါ်ကာလရှည်ကြာ နှစ်သက် သဘောကျနေသူများကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေသကဲ့သို့၊ ပရိတ်သတ်အသစ်များကိုလည်း ရရှိစေခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏တိုင်းပြည်တွင်မူ သူသည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတစ်ဦး မဟုတ်တော့ဘဲ၊ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင် ပြင်းထန်သောဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား Myanmar အစား Burma ဟုအကြိမ်ကြိမ်သုံးစွဲမှုအတွက် အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ သူ့အတွက် ပိုမိုစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအပေါ် ကိုယ်စားပြုသောအုပ်စုများမှ သူ့အပေါ် သံသယရှိကြောင်းအသံများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဥရောပတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ပြဿနာမှာ ဇွန်လအစောပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မွတ်ဆလင်လူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ဖြစ်ပွားသော လူမျိုးရေးအရ အကျည်းတန်သော ဖြစ်ရပ်အပေါ် မည်သို့ တုန့်ပြန်မည်နည်းဆိုသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ လူပေါင်းတစ်ဒါဇင်ခန့် သေဆုံးမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး၊ ၉၀၀၀၀ ခန့်မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကြရသည်။ မတရားလုပ်ဆောင်ခံရသော ရိုဟင်ဂျာများကို ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဖြစ်သော ဗမာအများစုနှင့် အခြား တိုင်းရင်းသားများက တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူများအဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရိုဟင်ဂျာများသည် ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ပါသလား ဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ သူကမသိပါဟု ဖြေကြားခဲ့ရာ အများစုကတုန်လှုပ်၍ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ကြရသည်။
အချို့ပြည်တွင်းဝေဖန်သုံးသပ်သူများသည် ယင်းကိစ္စအား မြန်မာစစ်တပ်မှ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီးသည်ဟု ယုံကြည်နေခြင်းအပေါ် စိတ်ပျက်ဖွယ် ဝေခွဲမရဖြစ်စေသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဗိုလ်ချုပ်များက ထိုကိစ္စကို ဖန်တီးခဲ့သည်ဟုဆိုလျှင် ၎င်းတို့တွင် ရည်မှန်းချက်အချို့ ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် သူ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပရိတ်သတ်များက စိတ်ပျက်သွားစေရန်လော။ သို့တည်းမဟုတ် စစ်တပ်၏ အရေးပါမှုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းလော။ ရခိုင်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ခြင်းကြောင့် စစ်တပ်မှ အရေးပါလာခဲ့သည်။ သို့တည်းမဟုတ် ကချင်ပြည်နယ် စစ်ရေးကိစ္စများကို အာရုံလွှဲစေလိုခြင်းကြောင့်လော။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ အထူးဆိုးရွားသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဥရောပတွင် ဒေါ်စုသည် မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် တစ်စုံတစ်ဦးအား ထိခိုက်နစ်နာစေမည့်ကိစ္စများကို ရှောင်ရှားသည့်အနေဖြင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု(rule of law)အရေးပါပုံကိုသာ အလေးပေးဖြေကြားသွားခဲ့သည်။ သို့သော် သူနှင့်အခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ခိုင်မာလှသည်မဟုတ်ပါ။ တိုင်းရင်းသားပေါင်းတစ်ရာကျော် အသိအမှတ်ပြုထားသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၄၈ ဗြိတိသျှထံမှ လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက နယ်စွန်နယ်ဖျားများတွင် သူပုန်ထမှုများရှိခဲ့ရာ အများစုမှာ တိုင်းရင်းသားများကို အခြေခံသောသူပုန်ထမှုများ ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့မှာ ထိန်းသိမ်းရမလွယ်သော တောင်ပေါ်လူမျိုးစု အနည်းငယ်အဆင့်ထက်များစွာပိုသည်။ တိုင်းပြည်၏ ကြီးမားသောဧရိယာမှာ တိုင်းရင်းသားဧရိယာဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံရှိသည်။ အများစုမှာ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ခါးသီးသောစစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့် သမိုင်းကြောင်းရှည်ကြီးရှိပြီး၊ အချို့မှာမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကြီးစွာပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။
မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင် ဦးသန်းမြင့်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံကို မအောင်မြင်သော အရှေ့ဥရောပပုံစံ တော်လှန်ရေးအဖြစ် ရှုမြင်လိုပုံရပြီး၊ အသွင် ပုံစံတူသော ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှ စစ်ဒဏ်ခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းက ပို၍နီးစပ်ကြောင်းဆိုသည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်စုအား ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မေးမြန်းခဲ့ရာ အဆိုပါနှိုင်းယှဉ်မှုကို လက်မခံဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုနိုင်ငံများလောက် မဆိုးရွားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအထိ အာဏာရယူထားခဲ့သော စစ်အစိုးရက တိုင်းပြည်ကို ဤသို့စုစည်းထားနိုင်မှုအတွက် အဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဖြစ် ၎င်း၏ ပုံရိပ်ကို အကောင်းမြင်စေခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရက စစ်တပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအား သူပုန်များလက်မှ ကယ်တင်ခဲ့သော တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရလက်ထက်က တိုင်းရင်းသားအများစုနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုရခဲ့သည်။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေးအရ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ၊ သူပုန်များသည် လက်နက်ကိုင်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ အများစုသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်သည့် ဒေါ်စု၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)နှင့် မဟာဗျူဟာကျသော နိုင်ငံရေးအရ မဟာမိတ်ပြုထားသည်။ ယခုအခါ စစ်အစိုးရသည် စစ်သားဟောင်းများ လွှမ်းမိုးသော အရပ်သားအစိုးရကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလက NLD သည်ပင်မနိုင်ငံရေးရေစီးသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်စုနှင့် အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်(၄၂)ဦးတို့သည်လည်း လွှတ်တော်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသာ အုပ်စုများကြားတွင်မှု NLD သည် မြန်မာများ၏ပါတီဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် စစ်မှန်သော ကတိကဝတ်များ ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယခင်ကတည်းကရှိနေသော သံသယများအတိုင်းပင် ရှိခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တပ်မှ တိုက်ခိုက်နေမှုများအတွက် ရှုတ်ချရန် တုံ့န်ဆိုင်းနေမှုအတွက် ဒေါ်စုအားလန်ဒန်တွင် မေးမြန်းစဉ် သူ၏ တုန့်ပြန်မှုအပေါ် ကချင်ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုက ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ လတ်တလောတွင် ကချင်အရေးသည် အလေးအနက်ဆုံးထားရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများကြောင့် လူပေါင်း ၇၅၀၀၀ခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရပြီး၊ လူ(၁၀၀၀၀)ခန့်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးကြရသည်။ ထို့အပြင် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(တောင်ပိုင်း) (SSA-South)နှင့်လည်း တိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့သည်။ ဒေါ်စုက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားတွင် ဖြစ်ပွားသောပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် အပြစ်တင်နေရမည်မဟုတ်ဘဲ အကြောင်းရင်းကိုရှာခြင်း၊ ပဋိပက္ခ၏အကြောင်းကို ရှာဖွေခြင်း ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြုံပြုခဲ့သည်။ စာရေးသူအနေဖြင့်မူ ထိုကိစ္စသည် ရှင်းပါသည်။ “မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်က လူမဆန်စွာပြုမူခဲ့ခြင်း(dehumanization)နှင့် စနစ်တကျ ခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့ခြင်း”ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအစိုးရသစ်သည် ကရင်၊ ချင်းနှင့် မွန်ကဲ့သို့သော သူပုန်အုပ်စုများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရန် စီမံလျက်ရှိသည်။ ကချင်နှင့်လည်း ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုအများစုမှာ အစိုးရ၏ ရိုးသားမှုအပေါ် သံသယများစွာ ရှိနေသေးပြီး၊ အစိုးရ၏ စစ်တပ်အပေါ် သြဇာရှိမှုအပေါ်လည်း သံသယရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စစ်တပ်သည် ကချင်များအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းရန် ဦးသိန်းစိန်၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လစ်လျူရှုခဲ့သည့်ပုံကို တွေ့ရသည်။
NLD အတွက်မှု ဒေါ်စုနှင့် သူ၏ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၎င်းတို့၏ တိုင်းရင်းသားမူဝါဒကို ပင်လုံသဘောတူညီချက် အသစ်တစ်ခု တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် ဖော်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်က သူ၏ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် တောင်တန်း ဒေသများတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အပြည့်အဝပေးရန် ကတိထားခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ၎င်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများသည် ပင်လုံသဘောတူညီချက် စိတ်ဓာတ်အပေါ် အခြေခံကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပင်လုံကိုပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း ကြီးမားသောလူထုထောက်ခံမှုဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုရသော ဧပြီလကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်၍ အကဲဖြတ်ရလျှင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစိုးရနှင့် ၎င်း၏တိုင်းရင်းသားများသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြင့် ပျော်ရွှင်စေမည့် အလုံးစုံပါဝင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ပြေလည်မှုကိုရရန် လိုအပ်သည်။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလားအလာများကိုသာ ကြည့်ရှုသင့်သည်။
အဆိုပါ ကချင်ဝက်ဆိုဒ်၏အဆိုအရ ပင်လုံသဘောတူညီချက်သည် ကျရှုံးခဲ့ပြီဟုဆိုသည်။ ကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများ၏ အမွေဆိုးများသည် ခါးသီးလှသည်။ စစ်တပ်အပေါ် သံသယဖြစ်မှုများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့သည်။ တရားဝင်ရော၊ တရားမဝင်ပါ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အကျိုးစီးပွားများမှာလည်း များပြားလာသည်။
ပြဿနာပြေလည်ရေးမှာ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒေါ်စုနှင့် NLD အတွက် အန္တရာယ်မှာ ၎င်းတို့နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှု ပိုမိုကြီးမားလာသည့်နှင့်အမျှ ပြန်လည်စည်းလုံးရေးအတွက် ယာဉ်တစ်စီးမဟုတ်တော့ပဲ၊ တိုင်းရင်းသားများ ဘဝတစ်လျောက် တိုက်ပွဲဝင်လာသောရန်သူ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်သည်။
galladino, honelay86, htinlinn, ko too, MNO.BN, painpainlay
07-08-2012 02:12 PM #520
ဟုတ်ပါပြီ.. အဆဲခံပြီး ၂ ဖက်လုံး.. ငါမေးပါဦးမယ်..။
၇ ဇူလိုင်ပွဲမလုပ်ရရင် သေသွားမလား..။ ဗိုလ်အောင်ကျော်နေ့ကျတော့ နင်တို့ လုပ်သလား..။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ရက်( တရားဝင် အမျိူးသားရေးနေ့) တွေကျတော့ နင်တို့ ပွဲလုပ်လား..။ ဘယ်နား မြုံနေကြတုန်း.. ဟင်..။ ဒါက နင်တို့ဖက်..။
အစိုးရဖက်ကျတော့ ပြောင်းလဲပါပြီနဲ့..။ ဘာကြောင့် ညကြီးဝင်စီးတုန်း..?? ခေါ်သတိပေးတာလောက်နဲ့ မရဘူးလား..။ ဘာကြောင့် မလုပ်စေချင်တာကို သေချာ ရှင်းပြပါ့လား..။ လက်သည်က နင်တို့မို့လား.. ???
ဆဲရမယ်ဆိုရင် ၂ ဖက်လုံး ဘောလိုလိုမှပဲ..။ အစိုးရကလည်း ပြည်သူတွေ စိတ်တိုင်းကျ ဒီမိုကရေစီကျ ရွေးကောက်ထားတာမဟုတ်..။ မဲလိမ်ပြီး တက်လာတာ..။ ဗ.က.သ ဆိုတာတွေကလည်း ဘယ်ကျောင်းသားတွေက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးလို့ သမဂ္ဂတက်ဖွဲ့ကြတာတုန်း..?? နှစ်ဖက်လုံးကိုက ကျုပ်အမြင်မှာတော့ ဒီမိုကရေစီကို မဆန်ဘူး..။ ဒါကြောင့် နှစ်ဖက်လုံးကို မကျေနပ်ပါ..။ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး (ဝါ) အမျိုးသား ပြန်လည်စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအရဆို ဒီ့ထက် လက်တွေ့ကျဖို့ သင့်ကြပါတယ်..။ သေချာလေး စဉ်းစားသုံးသပ်တော် မူကြပါကုန်..။
botherband, honelay86, ko too, Zarmane